ဗမာပြည်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့။ မျက်ကန်းမျိူးချစ်ရဲ့ စံပြ ကမ္ဘာမှာ စံနမူနာထားစရာက နာဇီဟစ်တလာပါ။ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်သမျှ ပြဿနာများဟာ ဦးအောင်သောင်း ဦးစီးတဲ့ ဖွတ်အမာခံများနဲ့ စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအထိ မီးမွှေးလိုက်တဲ့ ပြဿနာတွေပဲ ဖြစ်တယ်
ညီမောင် ဦးဇင်းဝီရသူ ထံ အရှင်ဇ၀နမှ မေတ္တာဖြင့် ပြန်ကြားခြင်း »
ဗမာပြည်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့။ မျက်ကန်းမျိူးချစ်ရဲ့ စံပြ ကမ္ဘာမှာ စံနမူနာထားစရာက နာဇီဟစ်တလာပါ။
Dr. David LawExcellent and courageous debater who compares Hitler’s Germans and today’s Burmans and all their common features: nazionalism, Master racism, discrimination, and more.
နှစ် ၈၀ အရင်က နာဇီ ဥပဒေတွေ မြန်မာပြည်မှာရှိနေပြီလား၊ ဒါဆို မနက်ဖန် ဘာဖြစ်မလဲ
ဒီဗွီဘီ စကားစစ်ထိုးပွဲ( DVB Debate) အစီအစဉ်၊
ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၄။
” မျက်ကန်းမျိူးချစ်ရဲ့ စံပြ ကမ္ဘာမှာ စံနမူနာထားစရာက နာဇီဟစ်တလာပါ။ နာဇီ ဆိုတာကိုက ပါတီ ရဲ့နာမည်၊ အမျိူးသား ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ။ အမျိူးသားရေးဆိုတာ ပါလာပြီ။ နော် .. သူဘာ တွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတော့၊ ဒါ ဗမာပြည်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့။
၁၉၃၃ ခုနှစ်မှာ ဂျာမနီမှာ ဟစ်တလာ အာဏာရလာပါတယ်။ ၀ိုင်မာသမ္မတနိုင်ငံ ဆိုတာကို ထူ ထောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူ စပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့တာက ဘာလဲဆိုတော့၊ ဂျာမန်တွေဟာ တ ခြားလူမျိူးနဲ့ လက်မထပ်ရဘူး။ ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ လိင်ဆက်ဆံခွင့်မပြုဘူး။
ဂျာမန်မဟုတ်တဲ့လူတွေကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား လွယ်လွယ်ထုတ်မပေးဘဲနဲ့၊ နိုင်ငံသားအ ခွင့်အရေးကို ရုပ်သိမ်းတယ်။ အဲ့ဒါမျိူး ဗမာပြည်မှာ ပေါ်ပေါက်နေပါပြီလား။
နောက် … ဂျူးတွေရဲ့ ဆိုင်ကို ဈေးမ၀ယ်ရဘူးလို့ ပိတ်ပင်တယ်။ ဒါမျိူး ဗမာပြည်မှာ ရှိနေပါပြီ လား။ အဲတော့ကာ.. ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးမှာ ဂျာမန်မဟုတ်တဲ့ ဂျူးတွေ မပတ် သက်ရ ဘူး။ အဲ့ဒီလို သင်္ကေတတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့သာ လွှတ်ထား ရင် Holocaust (ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျာမနီသိမ်းပိုက်ခံနယ်မြေများအတွင် ဂျူးလူမျိူးများ ကပ်ဘေး ဆိုက်ခဲ့ရခြင်း) ဆိုတဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျူးခြောက်သန်း အသတ်ခံ သေကြ ရသလို ကျွန်တော်တို့တွေလည်း သေကြရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ အဲ့ဒါဟာ ဒီကနေ့သွားနေတဲ့ အ မျိူးသား ရေးဆိုတာရဲ့ အဖြေပါဘဲ။ ”
(သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်)
(ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ၏ DVB Debate (ဒီဗွီဘီ စကားစစ်ထိုးပွဲ အစီင်္အစဉ်) မှ၊၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည့် “အမျိူးသားရေး နဲ့ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေး အကြောင်း ” စကားပြောအစီအစဉ်မှ ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့သည့် တတိယပိုင်းအစီအစဉ် (Part C) မှ ကောက်နုတ် ချက် များဖြစ်ပါသည်။ ဦးမျိူးသာထက်က တာဝန်ခံ စီစဉ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ )
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့သွားနေသည့် ဗမာ (သို့မဟုတ်) ရခိုင်တို့၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိူးသားရေးဝါ ဒဆိုသည်၏ လားရာ သည် မည်မျှထိ ဆိုးရွားသည့် ပန်းတိုင်သို့ ဆိုက်ရောက်သွားနိုင်ကြောင်းကို လူကြီးမင်းများသာ နားသောတဆင် ရှုစားပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်ကြစေလိုပါသည်။
This entry was posted on December 8, 2014 at 8:27 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.